यस्ता छन् हप्तामा एक दिन भोकै बस्नुको फाइदा – Jagaran Nepal
यस्ता छन् हप्तामा एक दिन भोकै बस्नुको फाइदा
के तपाईंको पाचन यन्त्रले कहिल्यै विश्राम पाएको छ ? किनभने तपाईं केही न केही खाइरहुनुहुन्छ। दिनमा तीन, चार पटक खानुहुन्छ। भोक लाग्छ, भरपेट खाइदिनुहुन्छ । हेर्दा स्वादिलो खानेकुरा भेट्नुहुन्छ, पेट चर्कनेगरी खाइदिनुहुन्छ। खानेकुरामा तपाईं पछि हट्नुहुन्न । जे पाइन्छ, खाइदिनुहुन्छ । जे आउँछ, मज्जाले पचाउँछ शैलीमा।
यद्यपी हाम्रो शरीरले सबै कुरा पचाउन सक्दैन । यसरी अपच हुने खानेकुरा शरीरबाट बाहिर निष्कासन हुन्छ । त्यसमध्ये कति विकार भने शरीरभित्रै रहन्छ । यही विकार हो, शरीरलाई रोगी बनाउने।
हामी शरीरका लागि आवश्यक खानेकुरा पनि सेवन गरिरहेका हुँदैनौं । कुन खानेकुरामा कुन किसिमको पोषक तत्व पाइन्छ, कसरी सेवन गर्दा ति पोषक तत्व प्राप्त हुन्छ, दिनमा कति पटक खानुपर्छ ? इत्यादि कुरामा त हामीलाई न चासो छ, न ज्ञान । अर्थात खानपानमा हामी त्यती सर्तक र सचेत छैनौं । यही कारण हाम्रो पाचन यन्त्र क्रमस शिथिल हुँदै जान्छ। कलोजो लगायतका अंगले सही ढंगले कार्यसंचालन गर्न छाड्छ।
पाचन यन्त्र नै कमजोर भएपछि शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व पुग्दैन। शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वको अभाव भएपछि नै हो हामीलाई रोगले जित्ने । अर्थात शरीरले रोगसँग लड्ने क्षमता गुमाउँछ । यसर्थ पाचन यन्त्रलाई चुस्त, बलियो राख्नका लागि हामीले खानपानमा केही अनुशासन पालना गर्नैपर्छ।